Man United Oo Dalab U Gudbisay Tababarihii Man City Ee Roberto Mancini & Haddii Uu Aqbalay Shaqada Old Trafford - Laacib
HomeWararka CiyaarahaMan United Oo Dalab U Gudbisay Tababarihii Man City Ee Roberto Mancini & Haddii Uu Aqbalay Shaqada Old Trafford
Man United Oo Dalab U Gudbisay Tababarihii Man City Ee Roberto Mancini & Haddii Uu Aqbalay Shaqada Old Trafford
Kooxda Man United ayay wararkii ugu dambeeyay sheegayaan inay xidhiidh la samaysay macalinkii hore ee Man City ee Roberto Mancini oo haatan layliya xulka qaranka Talyaaniga iyaga oo u bandhigay shaqada tababarenimo ee ka banaan Old Trafford.
Sida uu sheegayo wargeyska Germany kasoo baxa ee BILD, Mancini ayaa ku gacan saydhay oo diiday codsiga uu ka helay Man United isaga oo u sheegay inuu diirada saarayo sidii uu koobka aduunka ee 2022 ugu soo saari lahaa Talyaaniga.
Mancini ayaa ku hoggaamiyay xulkaasi inay kusoo guuleysteen tartankii Euro 2020 oo ay kasoo qaadeen England bilo kahor. Iyadoo koobka aduunka la ciyaarayo November 2022 ayuu xulka Talyaaniga oo aan wali xaqiisan booskiisu ciyaari doonaa kulamo bug-bax ah.
Mancini ayaa ah tababare hore usoo layliyay koox Manchester ah waxaana ay ahayd City oo loo magacaabay sanadkii 2008 markii ay mulkiilayaasha carbeed la wareegeen kooxdaas.
Mancini oo ahaa macalinkii salka u dhigay Man City-da cusub ayaa afar sano oo guulo ah lasoo qaatay Sky Blues isaga oo kula soo guuleystay FA Cup sanadkii 2011 halka uu sanadkii xigay Premier League la qaaday.
Man United ayaa haatan xooga saaraysa inay hesho tababare kumeel-gaadh ah oo ilaa xagaaga 2022 kooxdeeda sii hoggaamiya si ay tababare rasmi ah u raadsadaan marka xilli ciyaareedkani dhammaado.
Tababaraha Paris Saint-Germain ee Mauricio Pochettino ayaa dookha koowaad u ah boodhka Red Devils waxaana ay ilo-wareedyo badani sheegayaan inuu diyaar u yahay inuu kooxdaas iskaga tago xilli ciyaareedka oo socda.